‘म विधवा भएकै कारण छोरीको बेल विवाह गर्न पाइन’ |
सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय एकल महिला दिवस
प्रकाशित मिति :2018-06-23 10:00:20
नेपालमा अधिकांश एकल महिलाले श्रीमानको मृत्युपछि परिवार र समाजको लाञ्छना भोग्नुपरेको छ । आफू र छोराछोरीको पेट पाल्न संघर्ष गर्नुपरेको छ ।
२५ वर्षकै उमेरमा विधवा भएकी शान्ति महर्जनले पनि श्रीमान टोकेका आरोपमा घरदेखि समाजको कुरा सुन्नुपर्यो । छोराको मृत्युपछि परिवारले अंश दिन नमान्दा अंशकै लागि कानुनी लडाइँ लड्नु पर्यो । आज पनि उनी आफू र आफूजस्तै अन्य एकल महिलाको हक हितका लागि लडिरहेकी छन् र समाजमा उदाहरणीय महिलाको रुपमा पहिचान बनाएकी छन् ।
मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह काठमाडौं चन्द्रागिरी नगरपालिका ९ की अध्यक्ष शान्तिसँग विधवा भएपछि उनले गर्नुपरेको संघर्ष, नेपालका अन्य एकल महिलाको अवस्था र राज्यले गर्नुपर्ने कामका विषयमा महिला खबरका लागि सन्दिप विकले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
एकल महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको हो ?
एकल महिलालाई पहिलेदेखि नै नराम्रो तरिकाले हेरिन्थ्यो । अहिले पहिलो जस्तो छैन । केही परिवर्तन भएको छ । एकल महिलाका नाममा विभिन्न संस्थाहरुले पनि काम गर्दै आएका छन् । मलाई पनि २०६२ मा विधुवा हुँदा एकदम गाह्रो थियो । अहिले पहिले जस्तो छैन । छि छि र दूर दूरको अवस्था कम भएको छ ।
मेरो श्रीमान सशस्त्र द्वन्द्वमा बित्नुभयो । त्यो बेला धेरै गाह्रो भएको थियो । घरबाट बाहिर निस्कन समस्या थियो । रातो टीका लगाउँदा पनि सबै हेरिरहने । सबैले लगाउँदा मलाई पनि रातो टीका लगाउन मन लाग्थ्यो । तर ससुराले तैले लगाउनु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो । मेरो मनमा झन् ए म त एकल भएछु भन्ने हुन्थ्यो । केही समयपछि मैले बिर्सिसकेको थिए ।
एक वर्षपछि मैले रातो टीका लगाउँदा सबैले मलाई मात्र हेर्थे । साँच्चै म विधवा भएको रहेछु भन्ने लाग्थ्यो । पूजामा जाँदा तिमी जानुहँुदैन भन्थे । धर्म संस्कारदेखि लिएर हरेक तवरबाट मैले आफू एकल भएको महसुस गरे । घरपरिवारबाट नै धेरै अपहेलना पाए ।
पछि छोरीको बेल विवाह गर्नुपर्ने भयो । आमाबाबुले कन्यादान गर्नुपर्ने । श्रीमान छैनन् । मैले कन्यादान दिन मिल्दैन भने । मलाई ४÷५ दिनसम्म निन्द्रा नै लागेन । फेरि के गर्ने भन्ने भयो । अनि मैले छोरीको बेल विवाह नै गरिन । अर्काको घरमा गुफामा मात्रै छोरी राखे ।
श्रीमानको मृत्युपछि महिलालाई सम्पत्ति पाउन मुस्किल छ भनिन्न । तपाईंले सम्पत्ति पाउनु भयो कि भएन ?
सम्पत्तिका लागि मैले त मुद्दा नै लड्नुपर्यो । त्यो बेला छोरी ३ वर्षको थिइन् । म २५ वर्षकी थिएँ । केहि थाहा थिएन । श्रीमानका दुई दाजुभाई । श्रीमान सशस्त्र द्वन्द्वमा वित्नुभयो ।
देवरले पनि आत्महत्या गर्नुभयो । घरमा सासू ससुरा मात्रै । उहाँहरुले अंश दिनुभएन । तलाई किन चाहियो अंश भन्नुभयो । उहाँहरु दिनै नमान्ने । त्यसैले मुद्दा हाले । मैले सासू ससुराबाट केही सहयोग पाइन ।
अहिले म जस्ता धेरै एकल महिलालाई घरपरिवारबाट सम्पत्ति पाउन गाह्रो छ । किनभने छोरो रुहुन्जेल महिला बुहारी हुन्छे । छोरो बितेपछि काम लाग्दिन ।
सम्पत्ति दिनुपर्छ भनेर बुहारी नै होइनन् । छोराले विवाह गरेकै होइन जस्तो गर्छन् । सम्पत्ति दियो भने अरुलाई खुवाउछ भन्ने सोच्छन् ।
अझ एकल महिलाहरु अशिक्षित छन् । त्यसैले पनि उनीहरुलाई गाह्रो छ । छोरा हुन्जेल, बुहारी हो लक्ष्मी हो । छोरा बितेपछि कोहि न कोहि । अहिले पनि अंशवण्डामा नराम्रो सोच छ । अझै परिवर्तन गर्न सकेका छैनौ ।
– तपाईं काठमाडौं चन्द्रागिरी नगरपालिका ९ मच्छेगाउँको एकल महिला समूहको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । तपाईंको समाजमा एकल महिलाको अवस्था के छ ? उनीहरुका समस्या के छन् ?
पहिलेको तुलनामा धेरै परिवर्तन भएको छ । किनकी हामी एकल महिलाहरु एकजुट भएका छौ । हामीले खाना लगाउनुपर्छ भनेर आफ्नो हक अधिकार खोज्न थालेका छौ । कसैले केही भन्यो भने यो जन्मशिद्ध अधिकार हो भनेर आवाज उठाउँछौ ।
एकल महिलालाई ठूलो समस्या भनेको अंशकै कुरा हो । सम्पत्ति नभई केही गर्न सकिदैन । घरबाटै सम्पत्ति दिन मान्दैनन् । अशिक्षाकै कारण रोजगारी पाउन सक्दैनौ ।
आज कमायो । आजै खाइसकेको हुन्छ । बालबच्चालाई शिक्षा दिन सकिरहेका छैनन् । बच्चाहरु ५÷६ कक्षा पढ्छन् । आर्थिक अभावकै कारण पढाई छोड्न बाध्य छन् । एकल भइसकेपछि त्यो एकल महिला कहाँ जान्छ । के गर्छ । हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ, समाजदेखि घरपरिवारसम्मको ।
सरकारले दिने एकल महिला सुरक्षा कोषको रकम झिक्न कत्तिको सजिलो छ ?
पाँच हजार लिनका लागि धेरै दिन धाउनुपर्छ । एकल महिलाका लागि शिक्षा, रोजगारी, भनेर, औषधी, कृषिमा रकम छुट्याइएको छ । त्यति पाउनका लागि पनि हामी धेरै धाउनुपर्ने छ । झन्झटिलो छ । कहिले केही नमिल्ने, कहिले केही नमिल्ने । एक दिन काम गर्न गएन भने आफ्नो छाक टार्नै गाह्रो हुन्छ । त्यसले गर्दा यो रकम लिन गाह्रो छ ।
एकल महिलाका समस्या समाधान गर्न राज्य, समाज, घरपरिवारले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला ?
मृत्यु अकाट्य कुरा हो र अनिश्चित पनि । सबैका छोरी बुहारी विधवा हुन सक्छन् । समस्या सबैलाई पर्ने हो । त्यसैले हरेक आमाबुबा, दाजुभाई तथा दिदीबहिनीले आज उसलाई परेको समस्या भोली मेरै छोरी र दिदीबहिनीलाई पर्न सक्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । घरपरिवार राम्रो भएमात्रै समाज परिवर्तन हुने हो । परिवारको एकदम साथ चाहिन्छ । हरेक घरले परिवर्तन हुनुपर्छ । अनिमात्रै समाज बोल्न सक्दैन ।
एकल महिलाका लागि यति बजेट छुट्याउँछौ भन्नुपर्यो । एकल महिलाका नाममा बजेट छुट्याइन्छ । लक्षित वर्ग महिला भनेर आउँछ । १० प्रतिशत लक्षित महिलालाई आयो भने तिमीहरु एकल महिलाको लागि आएको हो र भन्ने गरिन्छ ।
आखिर एकल महिलाले कहाँ गएर माग्ने त । एकल महिलाको लागि हेर्ने, नगरपालिका, वडा भनिएको हुन्छ । तर त्यो ठाउँमा एकल महिलाका लागि बजेट छुट्टिदैन ।
हाम्रो लागि खै बजेट ? तिमीहरुको लागि बजेट आएको छैन । एकल महिला भनेर कहाँ छ भन्ने हुन्छ । राज्यले एकल महिलाकै लागि भनेर बजेट छुट्याउनुपर्छ । नगरपालिकामा एकल महिलाका लागि नै दिनुपर्यो । अहिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने भन्ने छ । त्यसले पनि केही परिवर्तन भएको छ जस्तो लाग्छ ।
भन्ने बेला एकल महिला भनेर आएको हुन्छ । तर एकल महिलाले पाएको हुँदैन । बजेटमा भयो । ट्रेनिङमा भयो । एक दुई जना एकल महिला हुन्छन् । अरु अन्य नै हुन्छ । यसमा आर्थिक पाटो नै एकल महिला । नाम नै एकल महिला शिर्षक दिनुपर्छ । सरकारले एकल महिला घरमुलि एकल महिलाको बच्चालाई तिनिहरुलाई शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
एकल महिलामाथिका कुरीति, कुसंस्कार तोड्न स्वंय एकल महिला कसरी लाग्नुपर्ला ?
एकल महिलाहरु डराउँने हुन्छन् । उनीहरुलाई सहयोगको आवश्यकता छ । उनीहलाई अंश लिनेदेखि हरेक कुरामा समस्या हुन्छ । तर पनि सहयोग पाउँदैनन् । घरबाट निकालिन्छन् कि भन्ने हुन्छ । उनीहरुलाई सर्पोटको आवश्यक छ ।